Daawo Sawiro> Faahfaahin ka soo baxeysa khasaaraha weerarkii caawa ka dhacay Muqdisho & Al-Shabaab oo sheegatay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawiro> Faahfaahin ka soo baxeysa khasaaraha weerarkii caawa ka dhacay Muqdisho & Al-Shabaab oo sheegatay!!
Daawo Sawiro> Faahfaahin ka soo baxeysa khasaaraha weerarkii caawa ka dhacay Muqdisho & Al-Shabaab oo sheegatay!!
Waxaa soo baxaya faahfaahino ka ku saabsan weerar ismiidaamin ah oo caawa intii u dhexeysay salaadihii maqribka iyo cishaha ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho.
Weerarkan ayaa yimid ka dib markii nin watay gaari miineysan oo noociisu ahaa Surf uu isku qarxiyey gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa amaanka oo ku sugnaa agagaarka isgoyska Sayidka, kuwaasoo loogu talo galay iney sugaan amaanka caasimada.
Qaraxa gaarigan oo si weyn looga maqlay magaalada Muqdisho ayaa sidoo khasaare nafeed u geystay ciidamo kale oo ku sugnaa bar koontrool oo halkaas ku taalla.
Rasaas fara badan oo ay ridayeen ciidamada dowlada ayaa halkaas laga maqlaay, taasoo dadka qaarkood ay u qaateen iska horimaad goobta ka socda, balse waxaa markii dambe la ogaaday in rasaastu aheyd mid hal dhinac ah.
Warbaahinta dowlada ayaa sheegtay in weerarkaas ay ku dhinteen saddex ruux oo kala ahaa ninka fuliyey weerarkan iyo labo askari oo ka tirsan ciidanka goobta ka sugnaa, hase ahaatee geerida ilaa afar ruux ayaa la xaqiijiyey kuwaasoo isugu jira shacab, askar iyo ruuxa isqarxiyey, waxaana ku dhaawacmay toban kale.
Sarkaal ka tirsan ciidamada milateriga Soomaaliya oo magaciisa lagu sheegay Dhamme Maxamed Maxamuud Nuur (Nadiif) ayaa la sheegay inuu ku jiray dadka dhaawacmay, waxaan la sheegay in gaarigiisa lagu dhuftay gaariga isqarxiyey oo xowli ku socday.
Gaadiid ay lahaayeen ciidamada dowlada oo goobtaas ku sugnaa ayaa la sheegay in sidoo kale uu burbur soo gaaray.
Taliyaha Qeybta Guud ee Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir oo Shir Jaraa’id caawa ku qabtay goobtii uu qaraxu ka dhacay ee nawaaxiga taalada Sayidka ee magaalada Muqdisho ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ka dhashay halkaasi.
G/le sare Bishaar Abshir Geeddi Taliyaha Qeybta Guud ee Ciidanka Booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay in saameyn badan uusan geysan qaraxa, wuxuuna xaqiijiyey Taliyaha dhimashada laba ka tirsan Ciidanka Xoogga iyo dhaawaca saddex askari oo kale
Dhinaca kale, Al-shabaab war ay soo dhigtay bogaga taageera ee internetka waxay ku sheegtay iney ka dambeeyeen weerarkan, waxayna intaa ku dareen in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo uu kaxaynayay nin ka tirsan Guutada ay ula baxeen istish-haadiyiinta uu beegsaday gaadiid kolonyo ah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda Federaalka sida ay warka u dhigeen.
Weerarkan oo ku soo beegmaya xili xasaasi ah oo madaxda dowlada Somalia iyo kuwa maamul goboleedyadu ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashooyinka.
Previous PostWasiir ka tirsan Maamulka Puntland oo Wiil kasoo Jeeda Buuhoodle, ku Toogtay Garoowe!! Next PostMaqaal xiiso leh : "Ri’deydu ha ii Codeyso" (W/Q: Dulyar)!